UYIKHETHA NJANI EYONA BHAFU IBALASELEYO (IMIFANEKISO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Uyikhetha njani eyona Bhafu ibalaseleyo (Imifanekiso)
Uyikhetha njani eyona Bhafu ibalaseleyo (Imifanekiso)
Ngaba ujonge ulwazi malunga nendlela yokukhetha ibhafu? Ngelixa ishawa inokukhawuleza, akukho nto inokuphika ukuba ibhafu ende, ethambileyo yindlela entle yokucoceka kunye nokuphumla emva kosuku olude. Ibhafu yokuhlambela sisongezo esihle phantse kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela- ukuba nje ukhetha efanelekileyo kuwe. Into yokuqala ekufuneka ujonge kuyo xa ukhetha ibhafu kulapho kwindawo yokuhlambela yakho oza kuyibeka kuyo. Ibhafu yinto enkulu enkulu ekufuneka uyenzile ukuze uqiniseke ukuba iyangena kwigumbi lakho loyilo.
Ukuqinisekisa ukuba ukhetha ibhafu efanelekileyo, linganisa ngononophelo indawo ofuna ibhafu yakho ibekwe kuyo. Oku kuya kukunceda ufumane ubungakanani obufanelekileyo bebhafu yakho. Khumbula ukuthathela ingqalelo indlela ibhafu eya kulunga ngayo kunye nokuhamba okupheleleyo kwegumbi lakho lokuhlambela. Awufuni ibhafu enkulu kangangokuba ibhloka ukufikelela kwakho kwisinki okanye imiphezulu yeetafile.
Emva kokukhetha indawo oza kuhlamba kuyo ibhafu, kuya kufuneka uzibuze, ngubani oza kusebenzisa ibhafu? Kuya kufuneka ukuba uqinisekise ubungakanani kunye nokumila kwebhafu efanelekileyo kubasebenzisi bayo. Ukuqinisekisa ukuba ibhafu yakho ikhululekile, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuphakama kunye nokuthambeka. Kuya kubakho ukubuyela umva okuya kukuvumela ukuba uphumle ecaleni kwebhafu kwindawo efanelekileyo. Uyakufuna ityhubhu ekuvumela ukuba uyandise ngokupheleleyo imilenze yakho xa uhleli. Iindawo zokubamba ezibunjiweyo, irim ebanzi kunye nokubamba imivalo ziimpawu zokuqwalaselwa.
Kuya kufuneka ukuba uqwalasele ukuba umgangatho wakho uyakwazi ukuphatha ubunzima bebhafu. Kuxhomekeka kwizinto ezenziwe ngazo, ezinye iibhafu zinzima kunezinye kwaye - xa uthetha umthamo wamanzi kunye nobunzima bomzimba womntu ityhubhu yindawo yokuhlambela enzima kakhulu. Kuya kufuneka ukuba uqwalasele ukuqiniswa kolwakhiwo kwindawo yakho yebhafu.
Emva kokukhetha indawo oza kuyo ibhafu yakho kwaye iya kuthatha ubungakanani kwaye imile kangakanani, kuya kufuneka ucinge ngohlobo lwebhafu kunye nezinto eziza kwenziwa ngazo. Nalu uluhlu lwezona ntlobo zibalaseleyo zeebhafu kunye neenzuzo kunye neengxaki zento nganye nokuba kufanelekile ukuba uyiqwalasele.
yintoni isikhumbuzo seminyaka engama-35
Iindawo zokuhlambela ezigqibelele
Iindawo zokuhlambela zentsimbi ezenziwe ngentsimbi
Gel-camera i-fiberglass bathtubs
Iibhafu zokuhlambela iMarble
I-Porcelain kwiibhafu zentsimbi
Ibhafu yentsimbi yelitye
I-acrylic yinto eyenziwe ngamashiti e-fiberglass abekwe phantsi kwamashiti e-acrylic enemibala. Banokuza ngemibala eyahlukeneyo kwaye bafumaneka ngokulula kwiivenkile zokuphucula ikhaya. Ukhetho oluthandwayo lwe-acrylic lubizwa ngokuba yiLucite enikezela umphezulu ogudileyo nongenayo indawo, othe kratya ukumelana nokuqina kunye nentuthuzelo kuneetyhubhu ze-acrylic eziqhelekileyo.
I-acrylic yinto efudumeleyo yendalo ekulula ukuyila kunye nokubumba kwimigca ethambileyo-egqibelele ekubumbeni ibhafu yokuhlambela. Kulula ukuyigcina, kwaye iya kuma kumaqondo obushushu aphezulu, iikhemikhali kunye nokufuma. Ukucoca rhoqo ngesixhobo esingacoci mntu kuya kuyigcina icocekile i-acrylic ngaphandle kokonakalisa umphezulu kwaye-ukuba uyawukrwela umphezulu we-acrylic, konke ekufuneka ukwenzile kukukunika isanti elula kwaye imikrwelo kufuneka inyamalale.
Le nto ngokuyintloko yentsimbi yentsimbi yokwaleka koqweqwe lwawo. Ngelixa iimilo kunye nobungakanani beetabhu ezenziwe ngesixhobo zinqongophele, ukutyabeka koqweqwe lwawo kuvumela uluhlu lwemibala etyebileyo enomgangatho ophezulu wokuqaqamba.
I-Enamel ye-Iron Iron yinto eyomeleleyo kwaye ehlala ixesha elide. Nangona kunjalo, oku kukwangumbandela onzima kakhulu ke ukufaka ibhafu yezi zinto kunokufuna ukuqiniswa kolwakhiwo. Iibhubhu zale nto ziyakhuhla kwaye kunzima ukuyidibanisa okanye ukuyicanda, into elungileyo ngokungathi ichip okanye ukukrwela kuyenzeka, ngekhe ukwazi ukuzilungisa ngokwakho. Ukuba ityhubhu yakho yentsimbi engenazintambo iyonakala, kuya kufuneka ingcali ukuyilungisa.
I-fiberglass eyenziwe nge-gel ikwabizwa ngokuba yi-fiberglass eqinisiweyo yeplastiki okanye i-FPR. Yenziwe ngokutshiza i-resin ye-polyester kwi-mold kunye nokuyiyeka ibe lukhuni. Izinto ezinokubakho zibubunzima obukhanyayo kunye nomphezulu ocwebezelayo ogudileyo owomeleleyo kunye nokukrwela okunganyangekiyo.
I-fiberglass eyenziwe nge-gel kulula ukuyibumba ukuze iibhafu ezenziwe ngale nto zinokuza ngeendlela ezininzi kunye nobukhulu. Yazi nangona umphezulu weglasi ye-fiberglass unokuchaphazeleka ngamabala, ukungunda kunye nokubumba kungoko kuya kufuneka ulumke kwaye ugcine le bhafu icocekile kwaye yomile xa ingasetyenziswa.
I-Marble ecwangcisiweyo yinto yamatye enjineli efana neetafile ze-quartz. Imarble eyakhiwe yenziwa ngokudityaniswa kwelitye lekalika elixutywe ne-fiberglass resins kunye neefillers ezigqunywe nge-gelcoat ecacileyo.
Ukudityaniswa kwezinto ezisetyenzisiweyo kwimarble evelisiweyo kuvelisa umxholo onobungqingqwa obomeleleyo kunye noomeleleyo, obungenamoya kunye nokukhanya okufudumeleyo, okuphezulu. Imabula emanyeneyo ayinyangeki kwaye kulula ukuyigcina. Nangona kunjalo, i-gelcoat iyanxiba emva kwexesha kwaye ibonakalise umzimba ophathekayo wento leyo.
I-Porcelain kwi-Steel Iibhafu
Ikwabizwa ngokuba yi-enamel ngentsimbi, iibhafu zeebhafu ezenziwe ngezi zinto zinenkangeleko efanayo yokuphosa iityhubhu zentsimbi kodwa zilula njengentsimbi ilula emva koko iyintsimbi.
Nge-porcelain yentsimbi, iphepha elincinci lesinyithi ligutyungelwe ngoqweqwe lwe-porcelain enamel lushiya umphezulu omenyezelayo ekulula ukuwucoca kunye nokuwagcina.
Ukucoca umgca phakathi kwendalo kunye nokwenziwa ngumntu, ezi zitya zidityanisiweyo zenzelwe ukuba zifane nelitye lendalo. Le mibhobho yentlaka ihlala iqinile kwaye inokwenziwa ngokudibeneyo ukuze ihambelane nobume bomzimba.
Imibuzo eqhelekileyo xa uzibuza ukuba uyikhetha njani ibhafu yindlela endazi ngayo ukuba loluphi ubungakanani ekufuneka ndilukhethile. Ubungakanani beebhafu eziqhelekileyo Rhoqo indawo yokuhlambela ingena kubukhulu obuziisentimitha ezingama-60 ubude nge-intshi ezingama-30 ububanzi, okanye ii-intshi ezingama-60 ubude nge-intshi ezingama-32 ububanzi. Xa ukhetha qiniseka ukuba ukhetha enye kwindawo efanelekileyo yokukhupha amanzi. Idreyini kufuneka ibe kwicala lasekhohlo okanye lasekunene ukuze uhambelane nemeko yombhobho webhobho yakho.
njani ukugcina ubudlelwane buhlala
Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela - Uyilo oluMnyama oluMhlophe kunye noMhlophe - I-25 entle yoyilo lwegumbi lokuhlambela elimhlophe - Iingcamango Zangasese Eziqhelekileyo
indie utata intombi iingoma zomdaniso
yintoni idayimani engenangxabano
Izambatho ze-cocktail zamabhinqa amabhinqa